किन मारिए राजा वीरेन्द्र ? राजा वीरेन्द्रको हत्यामा भारत र अमेरिकाको ‘खुनी हात’ रहेको खुलाशा ! « Light Nepal
किन मारिए राजा वीरेन्द्र ? राजा वीरेन्द्रको हत्यामा भारत र अमेरिकाको ‘खुनी हात’ रहेको खुलाशा !
Published On : 13 January, 2018 3:30 pm
२०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको असामयिक स्वर्गाराहेण भएपछि युवराज वीरेन्द्र नेपालका राजा भए । राष्ट्रियता, विकास र प्रजातन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर उनले शासनको बागडोर सम्हाले । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सदैव अक्षुण्ण रहोस् भन्ने अभिप्रायले उनले देशवासीलाई लगातार घच्घच्याइरहे । २०३१ फागुन १२ गते श्री ५ वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक वैदिक विधि तथा राजपरम्परा अनुसार विशेष सार्वजनिक समारोहबीच वसन्तपुर दरबारको प्रांगणमा अवस्थित नासल चोकमा सुसम्पन्न भयो ।
विश्वका एक मात्र हिन्दुराजाको शुभराज्याभिषेकमा सहभागी हुन साठी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरू नेपाल अएका थिए । राजा महेन्द्रले ५३ राष्ट्रसँग कूटनीति सम्वन्ध स्थापना गरिसकेकाले धेरैजसो राष्ट्र नेपालबारे अनभिज्ञ थिएनन् । विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको र नेपालले हजारौँ वर्षदेखि बचाएको स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डता अन्य देशका लागि समेत उदाहरणीय बनेको सन्दर्भमा त्यसबेला संसारले नेपाललाई सुक्ष्म रूपमा हेरिरहेको थियो ।
इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना–दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन् । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रहितको संवद्र्धन–सम्पोषण गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रियाले पटकपटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निःस्वार्थी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने इटालीका जनतामा चेतना आयो । मेजिनीकै समयमा राजा चाल्र्स अल्बर्टले इटालीलाई स्वाधीन तुल्याउन अस्ट्रियासँग युद्ध गरेका थिए । कस्टोजाको युद्धमा इटाली परास्त भयो ।
गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीले राजालाई सल्लाह दिए, “म सहज स्थितिमा राजातन्त्रको समर्थन नगर्ने मान्छे तर आज राष्ट्र गम्भीर संकटमा छ । त्यसैले म राष्ट्र बचाउन तपाईंलाई (राजालाई) जुनसुकै मद्दत गर्न तयार छु ।” नोभोराको युद्धमा पनि राष्ट्र परास्त भएपछि राजाले छोरा भिक्टर इमान्युअललाई गद्दी सुम्पे । उदार हृदयका भिक्टरले गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीसँग मिलेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने योजना बनाए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन मेलमिलापको नीति लिए । मेजिनीको सल्लाहमा प्रबल राष्ट्रवादी नेता क्याभरलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । उनले इटालीका जनतामा राष्ट्रवादको अपूर्व लहर ल्याए । क्याभरले भने ‘इतालिया फारा दा से’ (इटाली आफ्नो रक्षा आफैँ गर्छ ।) विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध यो खुला चेतावनी र सन्देश थियो ।
२०४३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरीचमानसिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीका प्रसंगमा छर्लंग भएका छन् । २०४५ सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले १५ महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । भारतका विदेशसचिव एस. के. सिंह ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर आए । अब भारतसँग मात्र हतियार किन्नुपर्ने, भारतको स्वीकृतिबेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो ।
राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाएर “राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरंकुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ” भन्दै २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गरायो । चन्द्रशेखर, हरकिशनसिंह सुरजित, सुब्रमव्यम् स्वामी, एम.जे. अकबरलगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र ‘तानाशाह’ हुन् भन्दा नेपालका कैयन् नेताले थप्पडी बजाए । बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसमेत धेरै राष्ट्रवादीहरू २०४६ सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन् ।
मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु र राजा वीरेन्द्रको हत्या जस्ता घटनाबारे स्पष्ट लेख्ने कतिपय लेखक र विश्लेषकले “चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाह्यशक्तिको दबाबमा गद्दीच्युत गरिएको विश्लेषण गरेका छन् । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, एकता, अखण्डता, अस्तित्व र इतिहासको रक्षा गर्न चाहने व्यक्ति र स्थायी शक्तिलाई सिध्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहनेहरूले २०४७ सालको संविधान निर्मूल गरेर जुन मार्गमा नेपाललाई डो¥याउन खोेजे, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको जरो त्यही हो । तसर्थ राष्ट्रमा स्थायी शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरूका साथै चेतनशील समुदायले परमुखापेक्षी प्रवृत्ति त्यागेर आफूलाई राष्ट्रवादको भावधारामा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । नत्र जति वर्ष बिते पनि नेपाल सदैव अस्थिर, अशान्त र अन्यौलग्रस्त भइरहने देखिन्छ ।-नागरिकन्युजबाट
इपीएलमा आज विराटनगर जित्नै पर्ने दवावमा
काठमाडौं । राजधानीमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट (ईपीएल) क्रिकेटमा आजदेखि समूह चरणका खेलहरू सकिने
सन्दीप लामिछानेले सार्वजनिक गरे अर्को नयाँ गीत ‘यो झरीमा’ (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका स्पीनर बलर सन्दीप लामिछानेको नयाँ गीति एल्बम सार्वजनिक भएको छ ।
नेकपा फुटाएर जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा
दाहालतिर हेर्दै ओलीले भने ‘मिल्ने भए
सन्दीप लामिछानेले सार्वजनिक गरे अर्को नयाँ
नेपाल र अमेरिकाबीच १७ वर्ष पछि